Times24 Nepal » कस्तो अवस्थामा हाडे बदाम खानु हुदैन ? जानि राख्नुहोस।
कस्तो अवस्थामा हाडे बदाम खानु हुदैन ? जानि राख्नुहोस।
बदाम प्रोटिनको श्रोत मानिन्छ। यसमा प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन रहेको हुन्छ। जुनसुकै मौसममा बदाम खान सकिन्छ।शरीरको वृद्धि विकासका लागि प्रोटिन नभइ नहुने तत्व हो। यदि दूध उपलब्ध छैन भने त्यसको सट्टामा पनि बदाम खान सकिन्छ। बदाम बढ्दो उमेरका केटाकेटी तथा वृद्धवृद्धाका लागि राम्रो मानिन्छ। नियमित बदाम खाँदाका यस्ता छन् फाइदा।